Howlgal ka socda Kismaayo, kadib qaraxyo xalay ka dhacay Magaaladaasi – STAR FM SOMALIA
Howlgal ka socda Kismaayo, kadib qaraxyo xalay ka dhacay Magaaladaasi
Ciidamada Maamulka Jubbaland ayaa saaka howlgal ballaaran waxa ay ka wadaan Magaalada Kismaayo gudaheeda, kadib markii xalay fiidkii labo qarax laga maqlay Magaalada gudaheeda.
Sida ay sheegayaan wararka laga helaayo Magaalada Kismaayo ciidamada Nabad Suggida Jubbaland, ayaa saaka ku yaacay qaar ka mid ah Xaafadaha Magaalada Kismaayo oo ciidamada ay Baaritaano dhanka ammaanka ku saabsan ka wadaan.
Xalay fiidkii ayaa qaraxyo kala duwan waxaa lagu tuuray Saldhiga Booliska Kismaayo iyo Xarunta Dowladda hoose ee Magaaladaasi.
Qaraxyadaasi ayaanan la sheegin Khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay, inkastoo Saraakiisha ciidamada Maamulka Jubbaland ay sheegeen wax Khasaare ah inaysan geysan.
Saraakiisha ciidamada Jubbaland ayaa Dhacdo.com u sheegay howlgalkaan in lagu raadinaayo dadkii ka dambeeyay Bambooyinka xalay ka dhacay Magaalada iyo mid kale oo shalay subax lagu tuuray xarun ciidamada Nabad Suggida ku leeyihiin Kismaayo.
Magaalada Kismaayo oo ka mid ah meelaha la filaayo inay ka dhacaan Doorashooyinka Xubnaha Baarlamaanka cusub ee dalka, ayaa waxaa xilligaan ka jirta qal qal dhanka ammaanka ah, maadaama shalay kaliya saddex qarax lagu tuuray saddex goobood oo kala duwan.
Ururka Al Shabaab ayaa Bambooyinka gacanta laga tuura iyo miinooyinka qarxa ku carqaladeeya ammaanka Magaalooyinka ay joogaan ciidamada Xooga dalka iyo kuwa Maamul Goboledyada dalka ka jira.
Xasan Sheekh “Baydhabo uma tagin inaan Ololaheyga doorashada ka bilaabo”